UBRIE LARSON AKUFUNEKI UKUBA ACACISE AMAGQABANTSHINTSHI AKHE - BRIE LARSON
UBrie Larson akufuneki ukuba acacise amagqabantshintshi akhe malunga neKapteni Marvel Press Tour
UBrie Larson akakwazi ukuqhwanyaza ngaphandle kweComicsgate esenza iividiyo ezingamashumi amahlanu malunga nendlela ayithiyileyo ngayo indoda emhlophe. Emva kokuba uLarson enze amagqabantshintshi malunga nokufuna ukhenketho lokushicilela UCaptain Marvel ukubandakanya ngakumbi, ii-troll zaqala ukumnyelisa kunye nefilimu yakhe, besithi ubenobuhlanga kunye nesini ngokuchasene namadoda amhlophe. Bade bagaxela iitamatisi ezibolileyo ngohlaziyo olubi lwefilimu, engekaphumi nangoku.
ULarson ngoku uye ngaphambili kwaye ucacisile izimvo zakhe kudliwanondlebe , esithi: Into endiyifunayo kukuzisa izihlalo ezingaphezulu kwitafile. Akukho mntu uthatha isihlalo sakhe. Akukho zihlalo zincinci etafileni, kukho izihlalo ezininzi etafileni. Ungayibukela ikliphu epheleleyo kwi-1: 20 yemizuzu engezantsi.
U-Larson uyiphatha kakuhle, kodwa eyona nto kukuba akufuneki ukuba acacise ukuba akayondoda yendoda. Ayizange ibeyinqaku leempendulo zakhe zoqobo, okanye ezinye iikowuti azenzileyo ngokwahluka kugxeko lwefilimu. U-Larson usebenzisa isikhundla sakhe selungelo lokuphakamisa abanye abantu basetyhini, ngakumbi abasetyhini abanemibala, kuba ulitshantliziyo nommeli. Akazami ukuthatha ubuntatheli bhanyabhanya kude nokugcinwa kwamadoda amhlophe, kodwa endaweni yoko kwinqanaba lokudlala.
Nangona kunjalo, kuba UCaptain Marvel Kubonakala ngathi ubethe imithambo-luvo ngama-fanboys anetyhefu, ngoku uLarson unyanzelekile ukuba acacise amagqabantshintshi ebengadingi kucaciswa kwasekuqaleni. Amagqabantshintshi akhe okuqala, njengoko kuxeliwe yiVanity Fair : Ndithi ndiyabacaphukela abantwana abamhlophe? Hayi andi. Into endiyithethayo yile ukuba uyenza imovie yileta yothando kumfazi onemibala, kukho ithuba eliphantsi ngobuhlanti lokuba umfazi onemibala uya kuba nethuba lokubona imovie yakho kwaye uphonononge imuvi yakho. Iyamunca into yokuba uphononongo lubalulekile, kodwa uphononongo lubalulekile. Siyakwandisa ukwenza iifilimu ezibonisa abantu abathenga amatikiti eemovie. . . Andidingi mfo omhlophe oneminyaka engama-40 ukuba andixelele into engamsebenzelanga Umbimbi wexesha. Ayenzelwanga yena.
U-Larson uxelele intatheli uKeah Brown kudliwanondlebe ukuba:
Malunga nonyaka ophelileyo, ndaqala ukunikela ingqalelo kwinto ezazijongeka ngayo iintsuku zam zokushicilela kunye nabagxeki ababephonononga iifilimu, kwaye ndabona ukuba kubonakala ngathi ngamadoda amhlophe ngokugqithileyo. Ke, ndithethile noGqr Stacy Smith kwi-USC Annenberg Incuction Initiative, odibanise isifundo ukuqinisekisa oko. Ukuqhubela phambili, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiqiniseke ukuba iintsuku zam zokushicilela zibandakanya ngakumbi. Emva kokuthetha nawe, umgxeki wefilimu uValerie Complex kunye nabanye abafazi abanemibala, kuvakala ngathi kuyo yonke ibhodi abafumani amathuba afanayo nabanye. Xa ndathetha namaziko awayengaboneleli ngawo, bonke babenezizathu ezahlukeneyo. Ndifuna ukuphuma kwindlela yam yokuqhagamshela amachaphaza. Kuthathe nje ukuba ndisebenzise amandla endiwanikwe ngoku njengoKapteni Marvel. [Indima] iza nawo onke la malungelo kunye namagunya andenza ndizive ndingonwabanga kuba andizidingi nyhani.
Akukho nto nakwezinye izicatshulwa zakhe ezibaluleke kakhulu esithi ndiyabacaphukela abantu abamhlophe kwaye akufuneki babone imovie. Nangona kunjalo, kuba uLarson litshantliziyo elithethayo, amazwi akhe atolikwa gwenxa ngamadoda afuna ukuba asilele kwaye abanike isizathu esisemthethweni sokumthiya kunye nefilimu yakhe. Emva kwayo yonke loo nto, uLarson engancumisi kwiitreyila unokufumana uloliwe wakho wenzondo ukuza kuthi ga ngoku.
UCaptain Marvel kukhupha ukuthengisa kwangoko kwetikiti kwiipropathi kumacala omabini endlela iMarvel / DC, kubandakanya U-Aquaman kwaye Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo . Iitroli, njengoko benqwenela, ngekhe zibe nefuthe elibi kwibhokisi yokugqibela yeefilimu, ebisoloko ifumana uphononongo kwangoko. Kodwa kubalulekile ukwamkela ukuba uninzi lwezinto uLarson ajongane nazo kukuziphatha ngesondo okunamandla kuba ungumfazi onezopolitiko kwaye iitrola azikuthandi oko.
(nge Incwadi yeComic Movie , umfanekiso: Ukumangaliswa)
alice nge tattoo yeglasi ekhangelekayo
bruce springsteen ecula usuku lokuzalwa olumnandi
Iinjinja zeninja ingoma yovuyo lokuzalwa
uphawu lwehamill kunye ne-sebastian stan
Ngaba akhona amaqhawe atyebileyo